Ku dhaji khariidada qoraalka ah ee AutoCAD, kaas oo si toos ah loo cusboonaysiiyay - Geofumadas
Ogast, 2017 AutoCAD-AutoDesk, Featured
Inkasta oo aan laga yaabaa in ay hal dhibic ka, taasoo muujinaysa soo dejiso Office in uu yahay aalad in lagu lala kartaa isbiriidhshiit Excel file ama Word, oo waxaa la dynamically updated sida file asalka ah waa modified, taariikhda sida koontada Brendan Haggerty waa habka aan ugu jecelahay inaan sharaxo sida aan geofumamos u isticmaalno qalabkan.
Qaybtii ugu dambaysay ee 2012, kulan xasilan ayaa lagu qabtey magaalo xeebeed yar oo ku taala koonfurta bari ee Maraykanka. Ma jiro warka lagu dhawaaqay kulanka. Ma jirin madaxyo dawladeed. Kaliya martida ayaa ah shaqaalaheena sare ee farsamada. Mawduuca kulankan: AutoCAD iyo 3D madani.
Horumarinta software si ay uga caawiso CAD dadka isticmaala si ay u badbaadiyaan wakhti, baabi'iyaan madax xanuun iyo in ay guriga ku soo noqdaan waqtigii loogu talagalay waa ujeedo hagida dhammaan shaqaalaha Axiom.
COOF oo ah Axiom wakhtigaas, dabeecad aad u cakiran oo leh aragti sir-doon ah oo indhaha indhaha ku haya, iyo kooxdiisii ​​kambuyuutarka ee horumarinta waxay ogtahay in dadka AutoCAD ay u baahan yihiin caawimaad. Intaa waxaa dheer, waxaa jiray tiro sii kordhaysa ee isticmaalayaasha MicroStation dalbanaya in aan ka dhigno qalabkayaga loo heli karo dadka isticmaala labadaba AutoCAD iyo 3D. Waqtiga ayaa u yimid inuu iftiimiyo jidkii AutoCAD / Civil 3D iyo bilaabi abuurista Axiom versions of AutoCAD iyo Civil 3D labadaba qalabka MicroStation ugu caansan. Laakiin suurtagal ma ahayn in la abuuro dhammaan qalabka hal mar, markaa waa inay ahaataa kan ugu horreeya? Waxaa jiray baahiyo badan oo loogu talagalay qalabyo badan oo kala duwan oo ay u muuqatay mid aad u adag, markii hore.
Jawaabtu waxay ahayd inay ahaato qalab bixiya gargaarka ugu weyn (oo lagu qiyaaso kaydinta waqtiga iyo yaraynta niyad-jabinta) tirada ugu badan ee isticmaala. Marka tani loo dhiso hab cad, qof walba waa la fahamsan yahay Qalabka Xafiiska Microsoft Office waayo, AutoCAD iyo 3D madani waa inay noqdaan kuwa ugu horreeya. Qalabka Axiom ee kale ee caan ah ayaa soo dhowaaday, laakiin shaki kuma jirin in Qalabka Xafiiska Microsoft ayaa ka caawin lahaa tirada ugu badan ee isticmaala waqtiga ugu gaaban.
Isticmaalaha MicroStation - waxay caadeysteen isticmaalka Qalabka Xafiiska Microsoft si sahal ah u dhajin foornooyin waaweyn oo macaamiisha ah ee loo yaqaan 'MicroStation' oo ku jira qaabka ugu fiican iyo sidoo kale xiriirka kuu ogolaanaya inaad ku soo noqotid faylka khayraadka si macluumaadka DGN loogu hirgeliyo si isdaba-joog ah loogu bedelo isbeddelada lagu sameeyay feylka - Waxay rabeen kuwan isku mid ah mashaariicda AutoCAD iyo Mashruuca 3D.
Macaamiisha qaarkood waxay ahaayeen kuwo murugo leh, xaqna waa sidaas. The Qalabka Xafiiska Microsoft Waxay samaysay nolosha macaamiisheena MicroStation si sahlan, laakiin markii ay ku mashquulsanayeen mashaariicda AutoCAD ama 3D madaniga, waxay wali ku xayireen isticmaalka qalabka wax lagu dhajiyo ee aan dhicin. Sanadaha la isticmaalayo Qalabka Xafiiska Microsoft MicroStation iyaga tusay sida ay wax wanaagsan laga yaabaa in samaynta dhibaatada aad u cad in mashaariicda ay AutoCAD iyo Madaniga 3D iyo in la sameeyo in ay jirto qolka badan horumar markuu u yimid in ay paste barasantigareeyaan on DWGs aad.
Ma tahay in shaqaalaha Axiom ee farsamoyaqaannada dhabta ah run ahaantii ay filayaan inay isticmaalaan si ay ugu noolaadaan nolol sahlan ee mashaariicda MicroStation Qalabka Xafiiska Microsoft, kaliya inay u ogolaadaan inay naftooda ku lafaguraan mashaariicda AutoCAD iyo Mashruuca 3D?
Waqti si aad shaqo u hesho
Oo sidaas daraaddeed waxay noqon doontaa: Kooxda horumarinta waxay abuuri doontaa adeegyadooda ugu horreeya ee ganacsiga Autodesk taasina waxay noqonaysaa Qalabka Xafiiska Microsoft.
El Qalabka Xafiiska Microsoft waayo AutoCAD iyo 3D macaamiishu waxay ka faa'iideysan doonaan sanado badan oo hagaajin ah, oo diiradda saaraya macaamiisha, oo laga sameeyey dhamaan dhinacyada Qalabka Xafiiska Microsoft ee MicroStation tan iyo markii la abuuray 1996. Habkeedu wuxuu noqonayaa mid aad u fiican, sababtoo ah ku dhawaad ​​labaatankii sano ee naqshadda version MicroStation.
El Qalabka Xafiiska Microsoft waayo, AutoCAD waxay lahaan lahayd sifooyinka dhabta ah ee isticmaalayaasha dhabta ah dhab ahaantii u baahan yihiin, oo ay uga mahadcelinayso siddeed iyo toban sano oo jawaab celin ah oo ka timid midnimadeeda (qiyaasta iyo tayada) saldhigga isticmaalaha MicroStation.
Si fudud u dheji, Qalabka Xafiiska Microsoft waayo, AutoCAD iyo 3D macaamiishu waxay ku dhasheen baaluq waxayna awoodi doonaan inay caawiyaan dad badan oo isla markiiba ah. Sanadaha sii kordhaya ee raaxo la'aanta uma baahna in lagu celiyo.
Waxaa la sameeyay koox horumarin yar. Mashruucan wuxuu ku qasban lahaa inuu ka hoos maro radar-ka iyadoo aan la ogaan, marka hore. Haddii macaamiisha ogaadaan waxa soo socda, sugitaanku xitaa way ku sii adkaan doonaan iyaga. Sidoo kale, su’aalaha xasaasiga ah sida “Ma la sameeyaa?” Iyo “Goorma ayey diyaar noqon doontaa?” Macaamiisha welwelka leh ayaa ka mashquuliya horumarka iyo shaqaalaha inay dhab ahaan gaaraan yoolalka: in alaabooyinka la dhigo gacanta macaamiisha.
Dhammaan wixii hadhay waxay ahayd inay noqdaan kuwo run ah. Horumarinta AutoCAD waxay leedahay caqabado u gaar ah. Nasiib wanaag, kooxda horumarintu maaha mid qalaad u ah horumarinta AutoCAD. Iyadoo wakhti buuxa oo lagu magacaabo AutoCAD horjooge horumarineed iyo ku dhawaad ​​40 sano ee khibrad horumarineed oo ka dhexjiray saddexda kooxood ee muhiimka ah, waxaanu ahaa hawsha.
Iyo, sida ay yiraahdaan, sagaal bilood kadib Qalabka Xafiiska Microsoft ee loogu talagalay AutoCAD iyo 3D madani. (Xaqiiqdii, waxay ahayd wax yar, hase yeeshee taasi waa wax yar oo jacayl ah.)
Nooca koowaad ee Qalabka Xafiiska Microsoft AutoCAD waxa uu ku dhashay oo taageero labada paste barasantigareeyaan Excel iyo waraaqaha Word galay files billabo. Haddaba waxay ahayd ma fududa oo kaliya in ay paste xaddi badan oo macluumaad fiican u formatted ka Excel iyo Word galay billabo la tallaabo hal, laakiin xogta la dhigaa sidoo kale updated, dabcan, la isbeddel in la sameeyo ee files asalka ka Excel ama Word ee mustaqbalka. files billabo waxaa si toos ah updated mar kasta u furan, si ay u muujiyaan isbedelada ugu dambeeyay ka dhigay in la diiwaangeliyo isbiriidhshiit ama qoraalka. Isticmaalayaasha xitaa ma aha inay ka walwalaan inay xusuustaan ​​in ay hubiyaan wixii cusbooneysiin ah.
Qalabka Xafiiska Microsoft for AutoCAD u ogolaanaya dadka isticmaala inay dhajiyaan si fiican u qaabeysan, faafin aad u ballaaran ee faylasha sawirada leh santuuqyada si fiican u degaan size size.
Jiheysteen yihiin maalmaha murugo marka users AutoCAD lahaa si ay u sameeyaan wax kasta oo la yimid dhisay AutoCAD in paste ay jadwalka, koobikaro, biilasha ee wax, xaddiga iyo barasantigareeyaan kale Excel ama qoraalo guud ee waraaqaha Word on file billabo . Sidoo kale xogta xayiran billabo ah (iyadoo la isticmaalayo nab amarka AutoCAD hooyo) aan si sax ah formatted, in cusub ku daray in saf isbiriidhshiit ma loo arki karaa in billabo iyo links aad si fudud uma shaqeeyaan.
Maxaa inoo keena maalmahayaga: Qalabka Xafiiska Microsoft waayo, AutoCAD iyo Madaniga 3D loo isticmaalay by macaamiisheena adduunka oo dhan si ay u badalo jadwalka dejinta iyo isbiriidhshiit Excel kale oo warbixin ka soo documents Word on your files billabo in hawl transcendent. Isticmaalka soo dejiso Office Microsoft waa waayo-aragnimo ka xoogbadan, ka biloow ilaa dhamaad ay tahay in la arko in la qadariyo.
Iyadoo aragtida ugu muhiimsan ee shaqaalaheena sare ee farsamada si ay u taageeraan dadka isticmaala AutoCAD si loo yareeyo waqtiga shaqada, niyadjab iyo shaqo labalaab ah, sida ay uga caawiyeen dadka isticmaala MicroStation sedexdii sano ee la soo dhaafay, ma awoodi karo sug in aad aragto kooxda kooxda horumarinta halkan Axiom ee xiga.
U fiirso naftaada isku day Xafiiska Soo-dejinta lacag la'aan maanta!
Si aad u qorto bandhig bilaash ah, online ama si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Xafiiska Soo-saaraha, buuxi foomka, iyo qof ayaa kula soo xiriiraya.
Post Previous«Previous LandViewer: image dhawrid Earth falanqaynta ee waqtiga dhabta ah ka siiyaa biraawsarkaaga
Post Next 3 ee isbadalada 27 ee QGIS 2.18Next »